Posted On 23-01-2021, 01:09PM
TORONTO, Canada - Mas'uuliyiinta hayada u adeegta bulshada Soomaalida oo ka dhisan magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa sheegay in ay la fajaceen go'aan ay waaxda ka tirsan dowladda ugu diidday dhaqaale loogu talagalay, kaddib markii ay ku tilmaantay in Soomaalidu aysan ahayn madow sax ah, sidda uu shaaciyay telefishinka CBC.
"Maanta xilligan uu adduunka marayo in wax noocaas oo kale ah lala kulmo waa arrin aad iyo aad iyo aad looga naxo," ayuu yidhi Maxamuud Xaaji Aadan oo ka mid ah aasaaseyaasha hayadda Soomaalida caawisa ee dhaqaalaha loo diiday.
"Dadka go'aannadan ay kasoo baxeen ama waxay kasoo jeedaan duni kale ama kama tirsana bulshada madowga ah," ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Lacagta ay dalbadeen ayuu sheegay in dadka lagu caawiyo loogu iibiyo qalabka shaqada - sida kumbuyuutarrada - sidoo kalena loogu fuliyo adeegyo kale oo aasaasi ah.
"Waxaan helay email lagu dhahayo in hayaddeenna aysan ahayn mid ay madow hoggaamiyaan," ayuu yidhi Karod. "Ma aanan rumeysanin wixii aan aqriyay. I rumeyso ilaa saddex jeer ayaan aqriyay warqadda."
"Warqaddii dhawaan ay dirtay waaxdeyda oo la gaarsiiyay hayadda ku guul darreysatay codsigeeda shaqaale raadinta ah waxay ahayd mid aan gabi ahaanba la aqbali karin," ayuu bartiisa Twitter-ka kusoo qoray Wasiirka, oo qudhiisa ku dhashay Soomaaliya.
Wuxuu intaas kusii daray: "Islamarkii warqaddaas la i tusayba, si deg deg ah ayaan u dalbaday in laga noqdo go'aankaas, waxaana la kulmay saraakiisheyda si aan ugala hadlo khadalka dhacay iyo sidii uu markii horeba ku yimid."
"Sidee bay waaxda dowladda ee magaceeda loo soo gaabiyo ESDC u hagaajin doontaa dhaawaca soo gaadhay xiriirkii ka dhaxeeyay iyada iyo bulshada madowga ah? Waxaa na heysta caqabado aad u badan iy dhibaatooyin badan. Kalsoonidii aan hannaanka dowladda ku qabtay dhaawac weyn ayaa gaadhay," ayuu yidhi.
Warbixin kasoo baxday Jaamacadda California ee dalka Mareykanka - oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu waaweyn caalamka - ayaa bulshada soomaalida ah ku dartay liiska jinsiyadaha caddaanka ah.
"Jaamacadda California iyo dhammaan xarumaha waxbarasho ee ka qeyb qaata barnaamijyada samafalka ee ardayda ayaa codsaday in loo soo gudbiyo xog ku saabsan faraca jinsiyadeed ee ardayda dhigata waxbarashada ka sarreysa dugsiyada sare. Hase yeeshee xogta lagu qeexay ardaydaas waxay ka duwan tahay midda taariikhiga ah ee ay heyso Jaamacadda California, sababo la xidhiidha isbadalladii la sameeyay 2010-kii," ayaa lagu yidhi qoraal ay jaamacadda ku daabacday boggeeda internet-ka.
Shan qeybood ayaa loo kala dhigay liiska asalka jinsiyadaha, sida ku cad warbixinta jaamacadda. Liiska Cadaanka waxaa sidoo kale ku jira Jabuuti, Suudaan, Masar iyo dalalka kale ee Carabta.